Malunga nathi - iZhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd.
Ubhedu Ball Valve
Khokela iValve yokuPhala yasimahla yeBhola
Iimveliso zeNkqubo ye-HVAC
Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: (Ngaphambili yaziwa ngokuba yinkampani yeTaizhou Wan De Kai Hardware Product Limited), eyasekwa ngo-1995, ibekwe kwi "China valve capital" - iZhejiang, Yuhuan, iseti yoyilo lwemveliso kunye nophuhliso, imveliso nentengiso kunye norhwebo njengenye kwee-valve zamashishini ezinobungcali (imibhobho yamanzi). Iimveliso zahlulwe zangamacandelo amathathu: Ivaluva zobhedu, izixhobo zobhedu, iimveliso zeHVAC. Ukuma kweMveliso kwinqanaba eliphezulu, ibakala, kugxininisa izibonelelo zokusingqongileyo, yayiyiNtla Melika, iYurophu kunye nezinye iimarike eziphuhlisiweyo zabathengi.
Indawo yesityalo esele ikhona ye-56000square yeemitha zokwakha indawo yeemitha ezingama-32000square, abasebenzi abangaphezu kwama-500, kubandakanywa nabaphathi abaphezulu kwama-70. Le nkampani iye phambili izixhobo imveliso kunye nezixhobo zovavanyo, including140 iiseti izixhobo umatshini CNC, umatshini ezizodwa amazwe iiseti 35 uvavanyo, iziko lokuvavanya 1.
Inkampani ipasile uhlelo lowe-1994, uhlelo lowe-2000, uHlelo luka-2008 loqinisekiso lokulawulwa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9000; Isiqinisekiso se-ISO14001 2004 yolawulo lokusingqongileyo kunye ne-OHSAS18001 - 2007ukuthatha isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwezempilo kunye nokhuseleko, uyilo lwayo kunye nophuhliso lolawulo lwe-PEX, ivelufa yebhola, ivelufa yeekona nayo ngokulandelelana kumazwe aseMntla Melika kunye nemimandla ye-NSF, CSA, UPC, UL enjalo njengesiqinisekiso semveliso.
Nge-5 ka-Agasti, ngexesha lokuhlengahlengiswa kombutho wezoqoqosho ngokudibeneyo wase-Yuhuan County, umnini-propati ufumene ubunini kunye nelungelo lokusebenza kweYuhuan County Longxi yokulungisa oomatshini.
Ukufumana imbasa yegolide "yamashishini emizi-mveliso yonyaka we-1994 yonyaka we-1994" ngurhulumente weli lizwe kunye norhulumente wesithili, nge-4 kaJuni, umzi-mveliso wokulungisa oomatshini waseYuhuan Longxi kunye neTaiwan Cheng Li industry Limited nguShare Ltd ngokudibeneyo, bamisela iTaizhou wad Hardware Co ., Ltd., kwaye ufumane ilungelo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle.
NgoDisemba, ishishini lanikwa i "Taizhou ezigqwesileyo Township Award Enterprise" yi Taizhou Township Enterprise Bureau.
NgoFebruwari, amashishini avavanywa yikomidi le-Yuhuan County Party kunye noRhulumente wasekhaya njengamashishini angama-100 aphezulu e-Yuhuan County ngo-1996. "Esi sakhiwo sigubungela ummandla omalunga ne-8658 yeemitha zesikwere kwaye sinendawo yokwakha emalunga ne-4950 yeemitha zesikwere. ngoku iSebe lokufudumeza amanzi kunye neTaizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co, Ltd.), kwaye sele isetyenzisiwe. I "coupling water express coupling" eziphuhliswe ngamashishini zanikwa amabhaso amabini enzululwazi nenkqubela phambili yeteknoloji. Urhulumente wase-Yuhuan County ngo-1997. "Isitshizi sokuzenzekelayo segadi" esenziwe lishishini sinikwe amabhaso amathathu enzululwazi kunye nenkqubela phambili yetekhnoloji ngurhulumente kamasipala waseTaizhou ngo-1997. "
NgoFebruwari, indawo yokwakha eyi-939.51 yeemitha zesikwere (ngoku iSebe lokufudumeza amanzi kunye neTaizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co, Ltd.) yasetyenziswa.
Imibhobho ye-PEX, iivalves zeringi kunye neevaluva zekona eziyilelwe kwaye zaphuhliswa zodwa nazo zidlulisile ukuqinisekiswa kwemveliso ye-NSF, CSA kunye ne-UPC kumazwe aseMntla Melika nakwimimandla.
Isatifikethi senkqubo yolawulo lokusingqongileyo ye-ISO14001-2004 kunye ne-OHSAS18001-2007 yenkqubo yolawulo lwempilo emsebenzini
Upasile ushicilelo luka-1994, ushicilelo lowama-2000 kunye nohlelo lowama-2008 loqinisekiso lomgangatho we-ISO9000.